महादेवको दर्शन गर्दै हेर्नु’होस् वि. स.२०७८ साल बैशाख ६ गते सोमबारको राशि’फल : – Sadhaiko Khabar
महादेवको दर्शन गर्दै हेर्नु’होस् वि. स.२०७८ साल बैशाख ६ गते सोमबारको राशि’फल :
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख ०५, २०७८ समय: २०:५५:५१
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल बैशाख ६ गते सोमबार इश्वी सन् २०२१ अप्रिल १९ तारीख चैत्र शुक्लपक्ष सप्तमी तिथी पुर्नवशु नक्षत्र सुकर्मा योग गर करण चन्द्रमां मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा धुम्र योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं बसन्त ऋतु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । अप्रत्याशीत खबरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । दुर्घट’नापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोछ । साथीसँग सामिप्यता बढे पनि लाभ भने ग्रहण गर्न सकिने छैन । नयाँ कार्यको थालनीका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । कार्यकुशलताले मान्यजनहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरले मनमा खिन्नता छाउनेछ । कार्यमा बिश्लेषणको अभा’वले पारिवारिक सम्बन्धमा बैमन’श्यता उत्पन्न हुनेछ । अपरिचीत ब्यक्तिहरुको बिश्वास गर्नाले षड्य’न्त्रमा फसिएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । भोजभतेरमा सरिक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) प्रति’स्पर्धीहरु कमजोर रहनेछन् । साझेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य ख’टपट आई पर्ला । तपाईको कार्यले अन्य ब्यक्ति हरुलाई मनग्य लाभ दिलाउने छ । मनमा सामान्य चि’न्ताले बास गर्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढ’बढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झ’ट उत्पन्न गराउला ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) सामान्य क्ष’ती ब्यर्होनु पर्ला । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभा’वको सा’मना गर्नु पर्ला । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आँट र साहशमा कमी आउनेछ । सन्तान सम्बन्धी समस्या’ले सता’उने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निराशा’पुर्ण ब्यतित हुने छ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) पारिवारिक मेल मिलाप बढेता पनि दाम्पत्य सुखमा बा’धा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि सम’स्याको कारण मनमा सामान्य चि’न्ताले सताउन सक्छ । कार्य कुशलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । पुरानो लगानी उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य आम्दानी हुने योग रहेको छ । कार्य सम्पादनमा बिभिन्न समस्याका कारण ढिलाई रहन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रु’टिले अप’जसको सा’मना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) अगाडि सारेका व्यक्तिद्वारा सम्पादित कार्यहरु बि’फल हुनेछन । कठि’नाइजनक यात्राको योग रहेको छ । आँटेका कार्यमा क’डा परिश्रम गर्नुपर्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बा’धा उत्पन्न हुनेछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झ’न्झट सहनु पर्ला ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) निरन्तर भइरहेका कार्यबाट बिशेष लाभ लिन सकिनेछ । अर्काको खुशीको लागी अना’वश्यक परिश्रम खर्चिनुपर्नेछ । सोचेको भन्दा बढि मात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ता’ले सताउन सक्छ । सामान्य चोटप’टकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । कार्य सम्पादनमा अरुको दबा’बको अनुभब हुन सक्नेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) अरुको बिश्वास गर्नाले दाम्पत्य जिवनमा ख’टपट उत्पन्न हुनेछ । अधिक आत्मविश्वासको कारण बन्न लागेका कार्यहरु बि’फल हुनेछन् । मान्यजनको स्वास्थ्यमा नका’रात्मक असर देखा पर्नेछ । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनशीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) टाढाको मित्रसँग अप्रत्या’सित मिलन हुनेछ । सामुहिक कार्यमा खर्च हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । हतारमा गरिएको निर्णयको कारण दाम्पत्य जीवनमा खट’पट उत्पन्न हुनेछ । बोल्दा बिचार पुर्याउनु होला । प्रतिस्पर्धीहरु कम’जोर रहनाले तपाईंलाइ कार्यक्षेत्र सहज बन्नेछ । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) खोज तथा अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा बौद्धिकताको खर्च हुनेछ । बाकपटुताको कारण कुरा का’ट्नेहरु चुप भइ प्रशंसा गर्न थाल्नेछन् । पठन पाठन सफल रहनाले बौद्धिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ । प्रतिस्पर्धीहरु कम’जोर रहनेछन् । आम्दानी क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । जटि’ल कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मनमा चन्चलता बढ्नाले निर्णय लिने क्षमतामा ह्रा’स आउनेछन । सफल कार्य सम्पादनको लागि क’डा परिश्रम गर्नु परे तापनि कार्य सफलताले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परिश्रम खर्चिनु पर्नेछ । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला ।